မွနျမာပွညျမှာ ကိုဗဈ ၁၉ ကူးသူ ၄ ဦးထပျတှေ့ - BBC News မွနျမာ
มุมมอง 153 184
Koko Lwin4วันที่ผ่านมา
Hannah Khin4วันที่ผ่านมา
Hooded1235วันที่ผ่านมา
Myo Min5วันที่ผ่านมา
nga lone5วันที่ผ่านมา
htet oo5วันที่ผ่านมา +3
Kojeeaung Kojeeaung5วันที่ผ่านมา +1
Soe Koko5วันที่ผ่านมา
Shine Htet Aung5วันที่ผ่านมา
karen karen5วันที่ผ่านมา
Sut Seng5วันที่ผ่านมา +1
tin nyunt6วันที่ผ่านมา
786swe6วันที่ผ่านมา
YE NAING TUNさん6วันที่ผ่านมา +3
Zaw Zaw6วันที่ผ่านมา +5
J\_D Dinh6วันที่ผ่านมา
Hibed De26วันที่ผ่านมา +1
Sai aung htoo6วันที่ผ่านมา +2
ဝင်နေကျ ထွက်နေကျ သတ္တဝါအားလုံးနဲ့ မြန်မာပြည်က လိမ်နေကျ သတ္တဝါအားလုံး ကိုကိုနာဘေးမှ အထူးကင်းဝေးကြပါစေ ။
ဖြစ်လာပြီးမှ ဟိုစစ်ဒီစစ် တောင်ပြောမြောက်ပြော ဆူညံငရဲပွက်လို့ ပြည်ပကဝင်လာသူ တယောက်ကို အထူး စောင့်ကြည့်ကုသပေးနိုင်ရင် နောက်လူတထောင်တသောင်းကို ကာကွယ်ရာရောက်ပြီးသားပါ လုပ်နေတာက ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှကိုမရှိဘူး ခုတော့အခက်ကြုံပါပြီ
khar run6วันที่ผ่านมา +3
Majid Khan5วันที่ผ่านมา
Gf Gf6วันที่ผ่านมา +1
Fir Zoe6วันที่ผ่านมา +2
Zaw Win Mon5วันที่ผ่านมา
myoe lay6วันที่ผ่านมา +2
sian lal6วันที่ผ่านมา
yin kyi6วันที่ผ่านมา +9
pyae sone aung4วันที่ผ่านมา +1
aung chit5วันที่ผ่านมา
ချစ်တယ်သူရာ ချစ်တယ်သူရာ5วันที่ผ่านมา
ktwo ktwo6วันที่ผ่านมา
aung aung6วันที่ผ่านมา +4
Khan 16วันที่ผ่านมา
Zar Zar วันที่ผ่านมา
Khan 12วันที่ผ่านมา
Zar Zar5วันที่ผ่านมา
Khan 15วันที่ผ่านมา
Zar Zar5วันที่ผ่านมา +1
A Channel6วันที่ผ่านมา +1
khinekhineoo 4774วันที่ผ่านมา +1
A Channel5วันที่ผ่านมา
A Channel6วันที่ผ่านมา
Muu York6วันที่ผ่านมา
Sai Yi Aung6วันที่ผ่านมา +2
ဧရာ ဧရာ6วันที่ผ่านมา +3
thang sian6วันที่ผ่านมา +1
Min Chit6วันที่ผ่านมา
mohamadishak malek6วันที่ผ่านมา +3
mohamadishak malek6วันที่ผ่านมา +1
mohamadishak malek6วันที่ผ่านมา +2
Kyu Thein6วันที่ผ่านมา
cuttie lu6วันที่ผ่านมา +3
sai min aung6วันที่ผ่านมา +1
Abdul Rohim6วันที่ผ่านมา +2
Zar Zar4วันที่ผ่านมา
pyae sone aung4วันที่ผ่านมา
Nay Min6วันที่ผ่านมา +6
BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို သိချင်တာလေး မေးပါရစေ
ပဲခူးက စက်ရုံတွေ မပိတ်တော့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့စက်ရုံအလုပ်သမားတွေ က ရောဂါကူးစက်မှာ ကိုလည်း စိုးရိမ် လစာမရမှာကိုလည်း စိုးရိမ် နေရပါတယ်
စက်ရုံက ဖွင့်ထားတော့ အလုပ်မဆင်းလို့ ၂ ရက်ကြာရင်အလုပ်ဖြုတ်ပါတယ် ။ လကုန်ရက်လည်း မဟုတ်တော့ လစာလည်း မထုတ်ပေးပါဘူး။ ဆင်းရဲသားတွေ အတွက် လစာရမှ စားဖို့ ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စက်ရုံကမှ တစ်ကယ့် လူစုလူဝေးပါ ။ စက်ရုံတွေ ဘာ့ကြောင့် မပိတ် တာလည်း ဘာ့ကြောင့် မပိတ်ခိုင်းတာလည်း သတင်းရရင်တင်ပြပေးပါ
SKY COOLING6วันที่ผ่านมา +1
cuttie lu6วันที่ผ่านมา
Lin Thit6วันที่ผ่านมา +9
rakhine thar5วันที่ผ่านมา
Ko Too5วันที่ผ่านมา
La yaung kiss La yaung kiss6วันที่ผ่านมา
bibi rabiya6วันที่ผ่านมา +1
bibi rabiya4วันที่ผ่านมา
stupid girl , you know English better than me. do you know I live in Canada. spelling is right or wrong doesn't matter.
don't teach me. who care about spelling
khar run6วันที่ผ่านมา
win zayar6วันที่ผ่านมา +1
ko ko6วันที่ผ่านมา +6
Owen Owen6วันที่ผ่านมา +11
ရိက်ခါ မလုံလောက်မှာစိုးလို့ မဟုတ်ဘူး အမေရေ့..အိမ်ပြင်ထွက်စရာ မလိုအောင် ဝယ်ထားကြတာ...ဈေး နေ့တိုင်းသွားမည့် အစား တစ်ပတ်မှတစ်ကြိမ် သွားတော့ ကောင်းတာပေါ့ အမေရယ်...ဝယ်နိုင်တဲ့သူဝယ်ပါစေ...
ကုန်ဈေးနှုန်း မတက်ဘို့သာ သွန်သင်လိုက်ပါ ဗျ..အိမ်ပြင်ထွက်တာ နည်းလေလေ ပိုးကူးစက်မှု သက်သာလေလေ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ...
ရှင်းသန့်မေ ရှင်းသန့်မေ6วันที่ผ่านมา +1
ပြည့်ဖြိုးကျော် ok6วันที่ผ่านมา +5
Kyu Thein6วันที่ผ่านมา +1
မွနျမာပွညျမှာ ကိုဗဈ ၁၉ ကူးသူ ၄ ဦးထပျတှေ့ - BBC News မွနျမာBBC News မွနျမာ
ဗွိတိသြှနနျးလြာ ဝလေမငျးသား ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရ - BBC News မွနျမာBBC News မွနျမာ
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ်ကြားက မြန်မာနွယ်ဖွား အထူးကုသူနာပြုVOA Burmese
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၂-၂၈-၂၀၂၀)VOA Burmese
COVID-19 ဗဟိုချက်မနေရာဖြစ်လာနေတဲ့ နယူးရောက်က မြန်မာအထူးကုဆရာဝန် အတွေ့အကြုံVOA Burmese
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂၀၂၀ မတျ ၃၀ ညပိုငျး)RFA Burmese လှတျလပျတဲ့အာရှအသံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗွီအိုအေ (အပိုင်း-၁)VOA Burmese
ဖှဲ့စညျးပုံကိစ်စ ဗိုငျးရပျဈပွသနာနှငျ့ ရခိုငျအရေးတို့ဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုအဓိက စိနျချေါနပေါတယျTrue Story
ရနျကုနျမှာ မနသေငျ့တဲ့ အကွောငျးအရငျး (၆) ခကျြALINKAR
ကပျဘေးဆိုကျနိုငျတဲ့ အခွအေနေ ကွညောထားရတဲ့ ဖိလဈပိုငျ မီးတောငျ အန်တရာယျ - BBC News မွနျမာBBC News မွနျမာ
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၃-၃၀-၂၀၂၀)VOA Burmese
ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ဆောက်ခဲ့ပေမယ့် မနေလိုက်ရတဲ့ မော့စ် ရဲ့ အိမ်ကြီးMyanmar Celebrity
รีแอคชั่น ! Ep.6 เพราะเราคู่กัน [2GETHER THE SERIES] สารวัตรต้องอดทนแค่ไหนเพื่อรอไทน์ !!โลกของคนมีหนวด